Gurman wuxuu sheegay in Apple ay ka shaqeysay HomePod ku shaqeeya baytari | waxaan ka imid mac
Gurman wuxuu sheegay in Apple ay ka shaqeysay HomePod ku shaqeeya baytari
Waa wax aad u cad in Apple ay la shaqeyso injineeradeeda alaabooyin fara badan oo wanaagsan oo ugu dambeyntii soo ifbaxaya. Xaaladdan oo kale shaandhada si fiican loo yaqaan Mark Gurman.
Imaatinka suuqa MagSafe ee ku dallaca iPhones xaqiiqdii waxay leedahay wax la sameeyo waxaas oo dhan, taasina waa in ku hadla smart sida HomePod, oo leh batari dib loo dallaci karo iyo saldhig dallaca oo bixiya MagSafe, shaki la'aan waxay u noqon doontaa wax soo saar wanaagsan dad badan. isticmaalayaasha Sida iska cad kuwa ku hadla ee leh baytari dibadda ah ayaa ku jira tiro aad u badan suuqa hadda, laakiin waxaan horayba u ognahay waxa dhacaya marka Apple ay horumariso alaabteeda.
Mark Gurman wuxuu ku dhamaaday rajaynaya inuu arko afhayeenkan
Sida Gurman u tilmaamayo in Apple ay la shaqaynaysay tusaalayaal ka mid ah af-hayeenkan smart oo leh baytari dibadeed, waxay muujinaysaa inaan ugu dambayntii ku arki doonin afhayeenkan suuqa. Way caddahay in ay ku yeelan karto suuqa hadda jira laakiin xaddidid. Waxaan ka hadalnaa xaddidaadda gaar ahaan qaybta caqliga leh ee afhayeenka, kaas oo waxay u baahan tahay isku xidhka Wi-Fi inta badan hawlaha.
Apple waxay had iyo jeer ka shaqeysaa noocyo badan iyo mashruucyo kuwaas oo aakhirka aan ku dhammaanayn iftiinka iyo suurtogalnimada kuwan ku hadla caqliga leh ee wata baytari dibadda ah waxay soo mareen miisaska xarunta Cupertino oo aan ku dhammaanayn inay arkaan iftiinka ugu yaraan mustaqbalka dhow. . Way caddahay in mar uun ay go'aansan karaan inay soo saaraan wax soo saarka qaabkan, laakiin Hadda waxa ay u muuqataa in aanay suurtogal ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Gurman wuxuu sheegay in Apple ay ka shaqeysay HomePod ku shaqeeya baytari
Isdiiwaangelinta Ciyaarta Fiidiyowga Humble waxay hoos u dhigi doontaa Taageerada Mac